जापानमा सम्पन्न एनआरएनए निर्वाचन, इ–भोटिङले दिएको गलत सन्देश - Everest Dainik - News from Nepal
जापानमा सम्पन्न एनआरएनए निर्वाचन, इ–भोटिङले दिएको गलत सन्देश
कहिलेकाँही त लाग्छ एनआरएनएले विदेशमा मिलेर बसेका नेपालीहरुलाई एक जुट भन्दा फुटाउने काम गरेको छ । जर्मनी हेर्‍यो त्यस्तै, बेल्जियम हेर्‍यो त्यस्तै, ओहो जापानको त झन कुरै नगरौं, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, मध्यपूर्व जताततै एनआरएनएको अधिवेशन आयो कि तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुने गर्दछ । मारमुङ्ग्री, बाहुबल र शक्तिको आड्मा हाकाहाकी एनआरएनए आफ्नो कब्जामा लिने रोग संसारभरि चल्दै छ । एनआरएनएकै चुनावका कारण नेपालीहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा बिभाजित हुने गरेको सबैको सामु छर्लङ्गै छ ।
यो रोग क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म घनिभूतरुपमा ब्याप्त छ । बिदेशका राजनैतिक दलका भात्तृसंगठनहरुले त बरु एउटा निश्चित अनुशासनमा रहेर आफ्ना आन्तरिक गतिबिधि मात्र सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् । भन्ने बेलामा गैरराजनैतिक संस्था भनिए पनि खुल्लमखुल्ला राजनीति त एनआरएनले गरिरहेको छ र गर्न सिकाईरहेको छ । सहमतिको नाममा महत्वपूर्ण पदहरु दलीय भागबण्डा गरेर बाँडिने गरिएको छ । राजनैतिक दलको मात्र भाग लाग्ने एनआरएनएमा अरुको भाग नलाग्नुको कारण पनि बुझिनसक्नुको छ । भागै लगाउने हो भने आदिबासी जनजातिले पाउनुपर्ने, पत्रकारले पाउनुपर्ने, ब्यवसायीले पाउनुपर्ने, विद्यार्थीले पाउनुपर्ने, कुकहरुले पाउनुपर्ने हो ।
अधिवेशनको नाममा जबर्जस्ती निर्बाचनको आयोजना गरेर आफ्नो हैसियत थाहा नहुने जो कोहीलाई पनि नेता हुने भोक जगाइदिएको छ एनआरएनले । त्यसैको परिणाम अहिले संसारभरि देखिईरहेका छन् । यसबाट कुनै पनि मानेमा राम्रो सँस्कारको बिकास भएको मान्न सकिदैन । यी सबै हेरिरहेका केन्द्रीय तहका एनआरएन नेताहरु जुंगामा ताउ लगाउँदै मजाक लिईरहेका छन् । हुन त उनीहरु पनि छिट्टै बुढानिलकण्ठ दरबार कि त बालकोट दरबार वा लाजिम्पाट दरबारको आशिक लिन जाने दिन नजिकै आईसकेको छ, जसरी नेपालका जो कोही प्रधानमन्त्री हुने बित्तिक्कै दिल्ली खुशी बनाउनु उनीहरुले पहिलो कर्त्तब्य ठानिन्छ । बिगतको अभ्यासले त्यही भन्छ ।
के नेपालीहरुले बिदेशमा तामझामका साथ चुनाव गर्न सुहाउँछ ? त्यहाँको कानुनले के भन्छ ? नेपालीहरु अरुको बलिको बोको बन्दै खानु न खुट्नुको भोट हाल्न बिदेश आएका हुन र ? बिगतका चुनावहरुले आमनेपालीहरुलाई के दियो ? फगतको मनमुटाव बाहेक अरु केही दिन सकेको छैन । यी तमाम प्रश्नहरुका बारेमा हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । हामी नेपालीले अन्य मुलुकका कम्युनिटीबाट पनि सिक्ने कोशिस गर्नुपर्दछ । के उनीहरुकहाँ पनि हाम्रो जस्तै टोल टोलका संगठनहरु छन् ? के उनीहरुले हामीले जस्तै एक थान नेतृत्वका लागि यसरी नै उत्ताउला र भड्कीला चुनाव गरेर भएभरका श्रम, शक्ति र महिनौ समय खेर फालिरहेका छन त ? अवश्य छैनन् । त्यसैले कहिलेकाँही हामीले झ्याल खोलेर बाहिर हेर्न पनि जरुरी छ ।
हाम्रो मानसिकता भनेको हामीले जे गरेका छौं ठिक गरेका छौं भन्ने रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्दछ । सिंगो नेपाली समुदायको आवश्यकता भन्दा बढि समय अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खेर गईरहेको तथ्यलाई बेलैमा सोचिनुपर्ने र सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सुधार कसरी ल्याउने त ?
एनआरएन अभियान आफैमा राम्रो अवधारणाबाट आएको मुलुकसंग जोडिने पवित्र संकल्पको नाम हो । तर नीति भन्दा नेता हुने भोक र एजेण्डा भन्दा भागबण्डा गर्ने रोगले जस्तोसुकै हथकण्डा मच्चाउन पनि तयार हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति मौलाएपछि यसमा नगरी नहुने संरचनागत सुधारका कार्यहरु सुरुवाती दिनदेखि नै ओझेलमा परेकै हुन् । संरचनागत सुधारको कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि संगठनको केन्द्रीय बिधानसंग मातहतका बिधान नबाझिने हुनुपर्छ तर एनआरएनमा त्यस्तो देखिदैन । बिधानले नछेकेपछि आफु पावरमा भएकोबेला चतुर खेलाडिहरुले आफुअनुकूल बिधान परिमार्जन गरी जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने हिसाबले माहौल बनाउन लाग्ने नै भए । हुन त चुनाव भनेकै छलछाम र धोकाघडी नै हो जसले सक्छ उसैले पछार्ने हो । भन्ने बेलामा असाध्यै सुन्दर भाषामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, धाँधलीरहित भनिए पनि परिणाम त्यस्तो हुँदैन ।
त्यसैले निर्बाचनबाट मात्रै सही नेतृत्व आउन सक्छ भन्ने कुरा मिथ्या साबित भईसकेको छ । अर्कोतिर बिदेशमा रहेका नेपालीहरु निर्बाचनको नाममा बिखण्डित हुँदै गईरहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी एनआरएनको बिधानबाटै निर्वाचनको बिकल्प खोजिनुपर्दछ । मातहतका तल्लो इकाईबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले छनौट गर्ने सरलीकृत निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा जानैपर्छ । खर्चिलो, भद्दा र उत्ताउला निर्बाचन प्रणालीले बिदेशका नेपालीहरुलाई कहीं पुरयाउँदैन । केवल बिभाजन, बिखण्डन र तनाव बाहेक निर्वाचनको उपलब्धी केही देखिदैन । संसारमा हरेक कुराका विकल्प छन् र सिष्टमबाट संभव भएका छन् भने यसमा सुधार ल्याउन पनि संभव छ, मात्र बिधिबिधान, नीति र योजना बनाउने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । बिदेशमा दुःख गरिरहेका नेपालीहरुलाई एनआरएनको चुनावका कारण महिनौ दैनिक कार्यसम्पादनमा डिष्टर्व हुने गरेको छ । यो जापानको मात्र समस्या होइन । यस बिषयमा एनआरएनका बौद्धिक हस्तीहरुको अविलम्ब ध्यान जान आवश्यक छ ।
सन्दर्भ जापानको, प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकी मतदानको अनुभवपछि पहिलोचोटी इ(भोटिङ प्रणालीमा एनआरएन जापानको निर्बाचन हालै सम्पन्न भएको छ । निर्बाचनको परिणामले क(कसलाई हार वा जित दिलायो त्यो सरोकारको बिषय भएन । पद्धति र प्रबृतिको कुरो गर्नुपर्दा यसपालीको इ–निर्वाचन एनआरएनए जापानको इतिहाँसमै सबैभन्दा विवादित र चरम लापरबाही निर्वाचनकारुपमा साबित हुन पुग्यो । यसको मुलजरो खोतल्ने हो भने ओकिनावा पुगेर संशोधन गरिएको बिधान प्रकरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ सबैभन्दा कम नेपाली छन् । त्यसपछि ठुला ब्यबसायिक संस्थाको लगानी र सहयोगमा सदस्यता बितरणमा अपारदर्शी चलखेल हुनु, त्यसको आधिकारिकता र प्रमाणिकरणमा एकाधिपत्य लादिनु, त्यसमा अरु कसैको पहुँच नहुनु, अर्कै प्रयोजनका लागि जम्मा पारिएको सोझा नेपालीहरुको रेसिडेन्स कार्डको आधारमा धमाधम पकेट भोट बनाईनु, एक को रेसिडेन्ट कार्ड अर्को नाम गरेको कार्डमा भेटिनु जुन सरासर कानुन बिपरित छ, १० हजारको हाराहारीमा मतदाता भएको जापानमा त्यसरी ३, ४ हजार पकेट भोट बनाईएपछि कसलाई हराउने कसलाई जिताउने भन्ने चापी आफ्नो हातमा हुने नै भयो ।
यसरी नियोजितरुपमा आयोजित इ भोटिङ प्रबिधिको प्रयोगले चाहेअनुसार चलखेल गर्न झन सजिलो बनाईदियो । त्यसकारण सोहीअनुसारको परिणाम आउनुलाई कुनै अचम्म मान्नुपर्ने देखिदैन । त्यसैले जितेकाहरु पनि पकेट भोटकै कारण जितेका हुन् धेरै दम्भ पाल्न आवश्यक छैन, र हारेकाहरु पनि त्यही १, २, ३, ४ पासवर्ड भएको पकेट भोटकै कारण हारेकाले अब धेरै रोइकराई गरिरहनुको अर्थ छैन । चित्त नबुझेमा कानुनी उपचारका लागि जाने निकायहरु पनि होलान् । हुन त एनआरएनको नारा ुनेपालीका लागि नेपालीु भए पनि भित्री नारा ुजसको शक्ति उसैको भक्तिु हुने गरेको देखिन्छ । यसअघि पनि धाँधली भएको उजुरीको अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । मुढेबलले जितेर नेता हुने सँस्कार एनआरएनभित्र हाबी छ, जुन कुरा जो कोहीलाई थाहा छ, नबोलेका मात्र हुन् । यस अघिका अग्रजहरुले सिकाएको यो सँस्कार नयाँ पुस्ताले पछ्याउने नै भए ।
यसपालीको इ भोटिङ निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर विजयी भएका हुन् या पराजित, उनीहरु आफ्नो बिशुद्ध भोटले हारजित भएका होइनन् । निर्बाचन समिति त बलिको बोको बन्न पुगेको मात्र हो । उनीहरुको के दोष बिचरा जे जसरी तयारी गरिएको थियो सोहीअनुसार पाएको जिम्मेवारी र लगाईदिएको काम खुरुखुरु गरे, सके । डिजाइन अनुसारनै महल ठडिने न हो । तर एउटा कुरा भने भन्नेपर्ने हुन्छ निर्वाचनपूर्व पटक पटक पत्रकार सम्मेलनको स्वाङ पार्ने निर्बाचन समितिले मतपरिणाम घोषणा गर्ने बेलामा भने हतार हतारमा न त उम्मेदवार न त उम्मेदवारको प्रतिनिधिको उपस्थिति, रेडिमेड नामावली भएझैं गरी फटाफट घोषणा गरेर आप्नो ड्यूटी पुरा गरेको देखियो जुन कुनै पनि हालतले सहि थिएन ।
अर्को प्रसंग, सहमतिको नाममा प्रमुख पदहरु दलिय भागबण्डामा, निर्वाचन समिति दलिय भागबन्दामा अब हुने मनोनित सदस्य पनि संभवतः दलिय भागबण्डामा यसरी सबै कुरा दलिय भागबण्डामै हुने हो भने एनआरएन राजनैतिक दलबिना आफ्नै खुट्टामा उभिनै नसक्ने गरी लङ्गडो भएकै हो त ? कसले बनायो यसरी एनआरएनलाई हेर्दा हेर्दै लङ्गडो रु आफ्नै अस्तित्व, आफ्नै बिरासत र आफ्नै गौरवमय इतिहास भएको एनआरएन आज राजनैतिक दलका भात्तृसंगठनको सहाराबिना स्वतन्त्ररुपले काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको सुखद संकेत मान्न सकिदैन ।
जापानमा छौं भन्न पनि लाजै मर्नु, नौ दिन बाँचे नौ लाख देख्न पाईन्छ भनिएझैं दुधको साक्षी बिरालो राखेर गरिएको इ(भोटिङको नौटंकी पनि देखियो । यसप्रकारका चर्तिकलालाई एनआरएनले निरन्तरता दिदैं जाने हो भने असन्तुष्टिको सानो झिल्कोले भोलि विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न । एनआरएनभित्र मौलाउँदै गएको निरंकुशताको जालोका कारण खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट समावेशी नेतृत्व चयन हुन कहिलै सक्दैन । परिणामस्वरुप एउटा समुह बिशेषको सीमित घेराभित्र मात्र संस्था कैद हुँदै आएको छ र हुंदै जानेछ । यसले संस्थालाई कहिलै हित गर्दैन, एनआरएनप्रति आम नेपालीको आस्था बढ्नुको साटो घट्दै जाने छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । (लेखक जापानमा सामजिक रुपमा स्थापित सस्था गल्कोट समाज जापानका निबर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)